वर्षा गराउने न्यून चापीय रेखा नेपालबाट हट्यो, कस्तो छ आजको मौसम ? — Motivatenews.Com
वर्षा गराउने न्यून चापीय रेखा नेपालबाट हट्यो, कस्तो छ आजको मौसम ?
काठमाडौं – अविरल वर्षा गराउने मनसुनी न्यून चापीय रेखा आजदेखि नेपालबाट हटेकाले वर्षा कम हुने अनुमान मौसमविद्ले गरेका छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् विभूति पोखरेलले उक्त रेखा बिस्तारै दक्षिणतर्फ सर्दै आजदेखि भारत प्रवेश गरेकाले अब वर्षा कम हुने जानकारी दिएकी हुन्।
‘तर त्यसो भनेर वर्षा नै नहुने भने होइन,’ उनले भनिन्, ‘मनसुनका बेला हो, वर्षा त हुन्छ नै, तर अब पहिलेजस्तो अविरल वर्षा हुने सम्भावना छैन।’ न्यून चापीय रेखा अहिले भारतको उत्तर प्रदेशतिर रहेको मौसमविद् पोखरेलको भनाइ छ। तर त्यो रेखा तलमाथि सरिरहने भएकाले पुनः नेपाल आउने सम्भावना पनि छ।
उक्त रेखा नेपालमै रहेका बेला लगातार वर्षा भएको वा हुने मौसमविद् बताउँछन्। यसअघि न्यून चापीय रेखा नेपालमै थियो भने न्यून चापीय क्षेत्र पनि सक्रिय थियो। यी दुवै प्रणाली सक्रिय रहँदा अविरल तथा भारी वर्षा भएको हो। जसका कारण देशमा बाढीपहिरो आएर ठूलो जनधन क्षति भयो।
अब भने बाढीपहिरोको जोखिम कम रहेको मौसमविद् पोखरेलको अनुमान छ। तैपनि पहिलेकै वर्षाले जमिन गलिसकेकाले थोरै वर्षाले पनि बाढीपहिरो जाने सम्भावना रहने भएकाले सतर्कता भने अपनाउनुपर्ने मौसमविद्को भनाइ छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशको पूर्वी भेगमा सामान्य बदली छ भने मध्य र पश्चिमी भेगमा आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदली छ। अहिले पूर्वी भेगका थोरै स्थानहमा वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ।
तर मनसुनी गतिविधि देशभर सक्रिय रहेकाले यही ठाउँमा पानी पर्छ वा भारी वर्षा हुन्छ भनेर किटान गर्न नसकिने मौसविद् पोखरेल बताउँछिन्। ‘त्यो यही काठमाडौं उपत्यकामा पनि हुन सक्छ वा तराईतिर पनि,’ उनले भनिन्।